Tsy fanajana mpandeha :: Mpamily taksibe iray nogadraina • AoRaha
Tsy fanajana mpandeha Mpamily taksibe iray nogadraina
Fanaovana tsinontsinona ny mpandeha sady fanetriben’ ny fitateram-bahoaka. Mpamily taksibe iray ao amin’ny zotra 015 no naiditra am-ponja vonjimaika rehefa niakatra Fampanoavana, omaly. Ny tsy fanajana ny lalan-jotra sy ny fitondran-tena tsy mendrika nataony tamin’ny mpandeha no niafara tamin’izao fana- saziana vonjimaika azy izao. Nisy mpitandro filaminana tamin’ireo mpandeha ka sendra ny patsa iray tsy omby vava, ilay mpamily.
Tsy nanohy hatramin’ny farany ny lalana tokony hitaterany an’ireo mpandeha ny fiara noentin’ity mpamily voampanga ity, ny alakamisy hariva lasa teo. Notereny hiverina an-dalana raha avy any 67Ha tokony ho any Mandroseza ilay taksibe. Nahodiny ny fiara nony tonga teny Tsimbazaza fa tsy nanohy ny lalany hatramin’ ny farany izy. Tsy nisalasala nampidina ireo mpandeha ao anaty taksibe izy avy eo.
“Tsy nanaiky izany anefa ireo mpandeha ka nangataka ny hamerenana ny saran-dalana”, araka ny fanazavan’ ny polisy avy ao amin’ny Boriborintany fahadimy, omaly, izay nandray an-tanana ny famotorana an’ity raharaha ity. Ny polisy no nantsoin’ ireo mpandeha rehefa raikitra ny fifamaliana teo amin’ireto farany sy ny mpamily.
Mbola tamin’ny fito hariva no nitranga ny disadisa.
Fantatra fa sady nanompa ireo mpandeha ihany koa ilay mpamily. “ Nisy mpitandro filaminana iray tao anatin’ny fiara. Niteny tamin’io mpamily io izy saingy teny mahery narahina ompa aza no navaliny”, hoy hatrany ny fitantaran’ny polisy ny zava-nitranga. Tsy nisy nihetsika tao anaty fiara mihitsy kosa ireo mpandeha rehetra na dia noentin’ny mpamily nanaraka azy niverina teny 67Ha aza.
Teny Andavamamba vao tratran’ny mpitandro filaminana ny fiarany. Nitory azy ilay polisy sy ireo mpandeha vitsivitsy niaraka taminy. Afak’omaly alina no nalaina am-bavany ity mpamily taksibe ity, izay saika tsy nanaiky nanaraka ny polisy fa mbola namalivaly azy ireo nandritra ny fotoana ela. Miandry ny fotoam-pitsarana any am-ponja ny lehilahy, nanomboka omaly.